Who are they?: အာဇာနည်မျိုး သေရိုးမရှိ
Posted by Who are They? at 1:22 AM
မှန် တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် ကြိုက်တယ်ဗျာ။ ပြည်ပ က လူတွေက နိုင်ငံရေး အကြောင်းပြပြီး အခွင့်အရေး ယူနေတဲ့လူတွေဗျ။ ကျွန်တော်ပြော တာ မကျိုက်လဲ မတတ်နိုင်ဘူးဗျ။ ပြည်တွင်းက လူတွေက သေတော့မယ်။ှဖမ်းခံရတယ်။ ပြည်ပက လူတွေက ဟိုလိုလုပ်ပါလားဒီလိုလုပ်ပါလား နဲ့ သူတို့ကျ တော့ 88 တုန်းက ကျောက်ပြီး ပြည်ပကို ပြေးကျတယ်။ကောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်က တော့ ငြိမ်းချမ်းရေး နဲ့ မတောင်းဆို ချင်တော့ ဘူး။ ပြန်ချချင်ပြီး။ Bomb ထောင်တဲ့လူတွေက ဘာလို့ အစိုးရ ကို မလုပ်ဘဲ အပြစ်မဲ့လူတွေကို လုပ်တာလဲ။ မလုပ်တင့်ဘာဘူးဗျာ။